Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Ka Walaacsan Xaalada Gumaysiga Itoobiya ee Murugsan.
Maraykanka oo Ka Walaacsan Xaalada Gumaysiga Itoobiya ee Murugsan.
Dawlada Maraykanka ayaa aad ugu walaacsan xaalada Gumaysiga Itoobiya khaasatan daganaansho la’aanta ka jirta gobolada Oromiya iyo Amhara.
Kaaliyaha Xoghaya Arimaha Afrika u qaabilsan dawalda Maraykanka Linda Thomes Greenfield ayaa waxay sheegtay ayadoo ka hadlaysa kulanka Qaramada Midoobay (QM) ee ka socda magaalada New York ee wadanka Maraykan in Gumaysiga Itoobiya ay masuul-kayahay daganaansho la’aanta iyo xaalada qalafsan iyo mudaaharaadada ee ka taagan dalka Itoobiya.
Mrs. Greenfield ayaa waxay ka sheegtay Golaha Amaanka ee QM inay arintan kala hadleen dawlada Itoobiya ayagoo ku dhiiiri galiyay inay wadahadalo la furaan ururada iyo shacabka mudaaharaad wadayaasha ah, sidoo kale ay xor ka dhigaan xoriyatul qawulka iyo saxaafada oo mamnuuc ka ah Itoobiya, sidoo kale waxay sheegay inay kala hadleen bulshada rayadka ah xuquuqdooda iyo in lasii daayo dhamaan maxaabiista kumaan kumka ah ee ku jirta jeelasha kala duwan ee ay leeyihin ciidanka Itoobiya.
Gobolka Oromiya mudaaharaadada lagaga soo horjeedo Gumaysiga Itoobiya waxay ka bilaabmeen bishii November ee 2015 kii sidoo kale waxay mudaaharaado dawlada looga soo horjeedo ka biloow deen waqooyiga wadanka itoobiya Gobolka Amhara. Mrs. Greenfield ayaa waxay sheegtay in maraykanku si wayn u aamin san yahay in xaalada itoobiya ay sii xumaan hayso sidoo kale dawlada Itoobiya way ogtahay suurtogalnimada in xaaladu ay hagaanto.
Waxaan kula kulanay magaalada new york raisal wasaaraha dawlada itoobiya waxaana ku dhiiri galinay inaan fiirin hayno sida dawalada itoobiya u qabato xaalada qasan ee ka taagan dalka waxayna tiri waan ka fikiray waana sii xumaan doontaa xaaladu sida ay maanta tahay si kasii daray hadii la raaci waayo sida xalku uu ku jiro.